Fahombiazan'ny orinasa - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
1.100×104 m3/d ozinina decarbonization misy skid ho an'ny CNPC
Ny tetikasa dia maodely amin'ny fitsaboana entona voajanahary avo lenta, ary koa ny maodelin'ny tanim-boaloboka Daqing izay nampihatra voalohany ny maody skid nitaingina, natao & novidina tao anatin'ny herintaona, ary nanamboatra sy niasa tany Avaratra-Atsinanan'i Shina.
Eo ihany koa ny fikarohanay amin'ny fampiroboroboana ny tetikasa EPC, ary ho kihon-dàlana lehibe ho an'ny orinasa ihany koa ny hampifandray ny rohy eo amin'ny teo aloha sy ny manaraka amin'ny tetikasa injeniera EPC.
2. 300×104 m3/d desulfurization skid-mounted plant ho an'ny CNPC
Ny entona voajanahary, aorian'ny etona tselatra avy amin'ny ranon-javatra manankarena MDEA, dia esorina amin'ny alàlan'ny fanasarahana rano asidra ny H2S, ary ny vahaolana MDEA misaraka dia arotsaka ao amin'ny tilikambo desulfurization ihany koa.
Ny vahaolana TEG manankarena ampiasaina amin'ny tilikambon'ny tsy fahampian-drano dia miditra ao amin'ny tilikambo fanalefahana, tanky misy etona tselatra ary sivana ary afanaina sy averina ho vahaolana TEG mahia. Avy eo dia arotsaka ao amin'ny tilikambo fanalefahana ny rano izy io mba hivezivezena ny tsy fahampian-drano.
Rehefa avy ny entona H2S misaraka amin'ny asidra rano separator dia tsindrona ao amin'ny asidra entona fitehirizana tanky, dia preheated amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra lafaoro, mamaly amin'ny rivotra notsentsin'ny rivotra compressor mba hiteraka SO2.
Ny SO2 dia miara-miasa amin'ny H2S sisa (fihetsika Claus) ka miteraka solifara singa, izay avy eo mangatsiaka mba hahazoana solifara.
Feed entona, rehefa avy ny mafy sy ny ranoka loto esorina amin'ny alalan'ny separator sy sivana separator, miditra ny mitsingevana valves tilikambo ho desulfurization, tilikambo izay mampiasa MDEA vahaolana ho desulfurizer.
Ny entona avy amin'ny tampon'ny tilikambo valva mitsingevana dia mandeha amin'ny separator fanadiovana mando mba hanesorana kely ny ranon'ny MDEA ao anaty entona, ary avy eo ny entona voajanahary mando dia miditra ao amin'ny tilikambo fanalefahana ny rano amin'ny alàlan'ny TEG.
Farany, ny entona voajanahary maina avy amin'ny tilikambo tsy fahampian-drano dia aondrana ho entona ara-barotra mahafeno fepetra.
Ny ranon-javatra manankarena MDEA ao amin'ny tilikambo desulfurization dia etona tselatra mba hanesorana ny hydrocarbons ary hiditra ao amin'ny sivana ho an'ny sivana. Aorian'izany dia miditra ao amin'ny tilikambo fanavaozana izy ary afanaina amin'ny etona mba hamerenana indray amin'ny ranon-javatra MDEA mahantra, izay entina mankany amin'ny tilikambo desulfurization ho an'ny desulfurization mivezivezy.
3. 120×104 m3/d ozinina kristaly evaporation ho an'ny CNPC
Ny famahanan'ny orinasa kristaly evaporation dia rano masira avy amin'ny orinasa electrodialysis ambony, ary ny fahafahan'ny zavamaniry dia 300 m3/d. Ny fotoana famokarana isan-taona dia 8000 ora, ary ny angon-drakitra fototra dia toy izao manaraka izao:
(1) fepetran'ny fidiran'ny rano masira
Fikoriana: 300 m3/d
tsindry: 0.4 ~ 0.45MPa (g)
Mafana: 20 ~ 50 °C
Loharanon'ny rano masira: rano masira voapoizina novokarin'ny electrodialysis, ny maloto mahazatra aorian'ny fitsaboana biochemical.
(2) fepetran'ny vokatra ivelan'ny orinasa
Fikoriana: 300 m3/ d
Fanerena: 0.25-0.27 Mpa (g)
Mafana: ~ 40 °C
Mafy: 0,25 t/h
4. 150-300×104 m3/d Ozinina tsy fahampian-drano TEG ho an'ny CNPC
Ny orinasanay dia nanangana orinasa Wei 202 sy 204 TEG dehydration miaraka amin'ny fahaiza-miasa amin'ny 300 × 104 m3 / d sy Ning 201 TEG tetik'asa fambolena dehydration miaraka amin'ny fahaiza-manao 150 × 104 m3 / d.
Ny fizotry ny orinasa tsy misy rano amin'ny TEG dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana entona voajanahary tsy misy solifara na entona voadio avy amin'ny orinasa desulfurization amin'ny alkaola amine. TEG vondrona dehydration dia tena ahitana ny absorption sy ny fanavaozana rafitra. Ny fitaovana fototra amin'ny dingana dia ny tilikambo absorption. Ny dingan'ny tsy fahampian-drano amin'ny entona voajanahary dia vita ao amin'ny tilikambo fanalefahana, ary ny tilikambo fanavaozana dia mamita ny fanavaozana ny ranon-javatra manankarena TEG.
Ny entona voajanahary fahana dia miditra avy any amin'ny farany ambany ny absorption tilikambo, ary countercurrently mifandray amin'ny TEG mahia ranon-javatra izay miditra avy any an-tampony ho any amin'ny tilikambo, avy eo ny entona voajanahary dehydrated miala eo an-tampon'ny hisakana ny fiasan'ireny tilikambo, ary ny TEG manankarena ranon-javatra dia navoaka avy. ambany ny tilikambo.
Aorian'izay dia miditra ao amin'ny tanky tselatra ny ranon-javatra manankarena TEG mba hamoahana ny entona hydrocarbon levona araka izay azo atao, rehefa avy nafanaina tamin'ny alalan'ny fantsona fanariana ny condenser eo an-tampon'ny tilikambo fanavaozana. Ny dingan'ny ranon-javatra miala amin'ny tanky tselatra dia mikoriana ao amin'ny mpanakalo hafanana sy ny tanky buffer manankarena manankarena rehefa voasivan'ny sivana, ary avy eo dia miditra ao amin'ny tilikambo fanavaozana rehefa avy nafanaina bebe kokoa.
Ao amin'ny tilikambo fanavaozana, ny rano ao amin'ny ranon-javatra manankarena TEG dia nesorina na dia nafanaina tamin'ny tsindry ambany sy ny mari-pana ambony aza. Ny ranon-tsakafo TEG navaozina dia nangatsiaka tamin'ny alàlan'ny mpanakalo hafanana misy ranon-javatra manankarena ary natsofoka tao an-tampon'ny tilikambon'ny fisoronana tamin'ny alàlan'ny paompy glycol ho an'ny fanodinana.
5. 30×104 m3/d molecular sieve dehydration plant ho an'ny CNPC
Fahafahana fitsaboana: 14 ~ 29 × 10 m3/d
Fanerena miasa: 3.25 ~ 3.65mpa (g)
Inlet mari-pana: 15 ~ 30 ℃
Ny votoatin'ny rano amin'ny entona fahana: 15-30°C rano feno rano
Fanerena famolavolana: 4MPa
Ny entona famahanan'ity tetikasa ity dia ny entona voajanahary misy votoaty CO2 avo lenta avy amin'ny sakana Lian 21 sy ny sakana Lian 4 ao amin'ny toeram-pitrandrahana Fushan, faritanin'i Hainan. Tamin'ny dingana voalohany sy afovoan'ny fitsapana mpanamory, ny entona novokarina avy amin'ireo sakana roa dia natao voalohany fanasarahana solika-entona ao amin'ny tobin'ny fanangonana entona Bailian, avy eo dia maina sy tsy misy rano amin'ny alàlan'ny molekiolan'ny sieve dehydration skid, ary avy eo dia notsindriana ho 14 ka hatramin'ny 14. 22 MPa amin'ny alàlan'ny compressor tsindrona entona ary ampidirina amin'ny tany.
6. 100×104 m3/d Ozinina fandraisana LNG ho an'ny seranan-tsambo Qasim, Pakistan
Ity tetikasa ity dia novolavolaina sy namboarina araka ny American Standard. Ozinina fitsaboana LNG sy sambo mpitatitra LNG dia mandefa LNG mankany amin'ny sambo mitsingevana entona LNG (fitehirizana sy famerenana indray) akaikin'ny FOTCO Wharf.
Hamboarina ny seranan-tsambo sy fantsona fandefasana entona vaovao hitaterana ny entona voajanahary efa nohavaozina avy ao amin'ny sambo mitsingevana entona LNG mankany amin'ny toerana ifandraisan'ny SSGC, izay mety amin'ny fandefasana ireo mpampiasa amin'ny ho avy.
Toerana fanorenana: seranan-tsambo faharoa lehibe indrindra ao Pakistan, seranan-tsambo Rath Qasim. Any amin’ny faritra iva amin’ny Reniranon’i Fitigli no misy azy io, sampana iray eo amin’ny ilany andrefan’ny Reniranon’i Indus Delta any atsimon’ilay tany. Ny avaratra andrefana dia eo amin'ny 13 kilaometatra nautika miala an'i Karachi. Io no seranan-tsambo faharoa lehibe indrindra any Pakistan. Izy io dia miasa indrindra ho an'ny fikojakojana vy any Karachi sy ny entana avy any ivelany sy fanondranana ao an-toerana, mba hampihenana ny tsindry amin'ny seranan-tsambon'i Karachi.
Fahafahana fitsaboana: 50 ~ 750 MMSCFD.
Fanerena famolavolana: 1450 PSIG
Fanerena miasa: 943 ~ 1305 PSIG
Famolavolana mari-pana: -30 ~ 50 °C
Ny mari-pana miasa: 20 ~ 26°C
7. 50×104 m3/d Ozinina liquefaction LNG ao an-tanànan'i Datong, faritanin'i Shanxi
Ny tetikasa Shanxi Datong LNG dia iray amin'ireo tetikasa manan-danja amin'ny angovo vaovao ao amin'ny Faritanin'i Shanxi ary tetikasa lehibe amin'ny fampiroboroboana entona any amin'ny faritanin'i Shanxi. Rehefa vita ny tetikasa dia ho tonga ny vokatra
Amin'ny maha iray amin'ireo foibe fitahirizana tampon'i Shanxi LNG, hahatratra 50x104 m3/d ny vokatra azony.
Ny tetikasa dia hanangana tetikasa liquefaction entona voajanahary 50 × 104 m3 / d sy fitaovana fanohanana ary tanky feno LNG 10000 m3. Ny singa fototra amin'ny dingana dia misy ny fanerena entona famahanana, unit decarbonization, unit decarbonization, unit dehydration, fanesorana merkiora sy fanesorana lanja, unit hydrocarbon, unit liquefaction, fitehirizana refrigerant, fanerena etona tselatra, toeram-pambolena tanky LNG ary trano fandefasana entana.
8. 30×104 m3/d orinasa desulfurization ho an'ny CNPC
Ny tetikasa fanohanana ny skid nitaingina desulfurization orinasa ho an-dranomasina entona fantsakana any Andrefana Sichuan Province, entona voajanahary skid fitsaboana, no tetikasa voalohany izay ny orinasa miara-miasa amin'ny Sinopec Petroleum Engineering Design Co., Ltd.;
Ity tetikasa ity dia ny tetik'asa fanohanana ny desulfurization entona voajanahary amin'ny 0.3 100 × 104 m3 / d ao amin'ny fantsakana Pengzhou 1, ao anatin'izany ny skid fanodinana entona voajanahary, ny fanarenana solifara sy ny famolavolana, ny injeniera ho an'ny daholobe ary ny vondrona hafa.
9. 120×104 m3/d toeram-pikarakarana entona rambo ho an'ny CNPC
Tompon'ny: CPE an'ny Southwest Design Institute
Medium: entona rambo Claus, entona fako TEG, entona fako dobo solifara
Fahafahana fitsaboana: 120x104 Nm3/d
Fanerena miditra: 37kpa (g)
Ny mari-pana fidirana: 170 °C
Mikoriana miditra: 52k mol/h
Votoatin'ny CO2: 23,3222 g/m3
SO2 afa-po: 0,4609 g/m3
Ity andian-tsarimihetsika fitsaboana entona ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny gazy Claus rambony sy ny entona fako dobo solifara avy amin'ny orinasa fanarenana solifara avy amin'ny orinasa fanarenana solifara ary ny fitsaboana ny entona fako TEG avy amin'ny orinasa tsy fahampian-drano. Ny fahaiza-manaon'ny famolavolana ny ozinina dia mifanandrify amin'ny an'ny ozinina fanarenana solifara sy ny orinasa tsy fahampian-drano.
Ity zavamaniry ity dia mampiasa ny fizotran'ny CANSOLV ankatoavin'ny orinasa Shell, ary ny entona rambony aorian'ny fitsaboana dia mety hahatratra ny fenitra famoahana SO2 amin'ny 400mg/Nm3 (fototra maina, 3vol% O2). Ny fotoana famokarana isan-taona amin'ny orinasa dia 8000h, ary ny fahafaha-miasa dia 50% ~ 120%.
10. 600×104 m3/d toeram-pikarakarana entona rambo ho an'ny CNPC
Ny tetikasa dia vondrona fitsaboana entona rambony izay manana fahaiza-manao 600 × 104 m3 / d ao amin'ny orinasa fanadiovana CNPC Gaomo. Izany no tena ampiasaina amin'ny fitsaboana Claus rambony entona solifara fanarenana vondrona, ary koa ny ranon-javatra solifara dobo fako entona ny solifara fanarenana vondrona sy TEG fako entona ny tsy fahampian-drano vondrona. Ny fahaizan'ny fitsaboana amin'ny famolavolana ny fitaovana dia mifanandrify amin'ny vondrona fanarenana solifara sy ny unit dehydration. Ny orinasa dia mampiasa ny fizotran'ny CANSOLV ankatoavin'ny orinasa Shell ary ny entona rambony aorian'ny fitsaboana dia mety hahatratra ny fenitra famoahana SO2 amin'ny 400mg/Nm3 (fototra maina, 3vol% SO2).
11. 600×104 m3/d ozinina kristaly evaporation ho an'ny CNPC
Ny zavamaniry dia mampiasa fomba evaporation sy condensation mahomby amin'ny fikarakarana rano masira. Ny rano vokarina tsaboina amin'ny alalan'ny evaporation crystallization unit dia ampiasaina indray ho toy ny makiazy rano hivezivezy rano mangatsiaka, na toy ny rano famokarana hafa ao amin'ny orinasa. Avahana amin'ny rano maloto ny loto amin'ny endrika sira kristaly. Ny famahanan'ny orinasa kristaly evaporation dia rano masira avy amin'ny orinasa electrodialysis ambony, ary ny fahafahan'ny zavamaniry dia 300 m3/d. Ny fotoana famokarana isan-taona dia 8,000 ora.
Ny evaporation multi-effective dia raisina mba hahatsapana ny fampiasana tsikelikely ny angovo ary miharihary ny fiantraikany mitsitsy angovo.
Ny hafanana fako amin'ny rafitra manontolo dia ampiasaina tanteraka. Ny vondrona crystallization evaporation dia tsy mila angovo hafanana avo lenta fotsiny mba hahatanteraka ny fivoahana tsy misy rano avy amin'ny orinasa fanadiovana entona voajanahary.
Ny vokatry ny fitsaboana dia tsara, ary ny rano voatsabo dia afaka mahafeno ny fenitry ny rano mivezivezy, ka azo ampiasaina ho rano fanamboarana ny rano mivezivezy.
Ny fantsona fifanakalozana hafanana dia vita amin'ny fitaovana titane miaraka amin'ny fahombiazan'ny famindrana hafanana. Ny fitaovana lehibe hafa dia mampiasa takelaka mitambatra 316L, izay manana fiasa maharitra, automatique avo lenta, fiasa tsotra ary sehatra fampiharana malalaka.
12. 240 m3/d Ozinina mitambatra fitaterana solika sy entona ho an'ny tanimbary Yumen
Ao amin'ny bloc Huanfu, Longdong, Yumen Oilfield no misy ny tetikasa.
Ny akora nalaina avy amin'ny fantsakana menaka (menaka maloto mitondra rano sy entona) dia miditra ao amin'ny faritra fanafanana ny orinasa mba hafanaina ho 45 ℃ rehefa avy nandray baolina sy feno fatrany. Aorian'ny hafanana, ny ampahany amin'izany dia entina mivoaka amin'ny alàlan'ny paompy fitaterana mifangaro, ary ny ampahany hafa dia miditra ao amin'ny fizarana fisarahana ho an'ny fisarahana amin'ny entona. Ny entona misaraka dia ampiasaina ho fitaovana fanafanana aorian'ny fitsaboana ao amin'ny orinasa fanarenana condensate, ary ny dingan'ny rano misaraka dia entina mivoaka amin'ny alàlan'ny paompy fitaterana mifangaro.
Fahaiza-manao fitsaboana: 240 m3/d
Fanerena miasa: 0.35Mpa (g)
Fanerena famolavolana: 0.8MPa
Hamandoana fidirana: 5 ~ 25°C
Hamandoana fivoahana: 40 ~ 50°C
Hamandoana famolavolana: 60°C
Ny votoatin'ny rano amin'ny rano miditra: 50%
13. 30×104 m3/d Ozinina liquefaction LNG ao an-tanànan'i Cangxi
Nampiasa vola avy amin'ny Cangxi Datong Natural Gas Investment Co., Ltd. Miaraka amin'ny 170 tapitrisa yuan, ny tetikasa dia hanorina 300 × 104 m3/d LNG tetikasa liquefaction sy ny tohanany sy ny 5000 m3 LNG tanky feno.
MRC refrigeration dingana no lany, ary ny tena zava-maniry dingana ahitana entona manta pressurization vondrona, decarburization vondrona sy ny dehydration vondrona, merkiora fanesorana sy mavesatra hydrocarbon fanesorana vondrona, liquefaction vondrona, refrigerant fitehirizana, tselatra etona pressurization,
Faritra tanky LNG sy trano fandefasana entana.
Fahaizana: 30×104 m3/d
Fanerena miasa: 5.0 MPa (g)
Fanerena famolavolana: 5.5 Mpa (g)
Fitehirizana tanky: 5000m3 feno fahafaha-manao tank
Ny mari-pana fitehirizana: -162°C
Fanerena fitahirizana: 15KPa